चर्चित हस्तीलाई हराएको १३ वर्षपछि चर्चामा आएका दावा – Nepal Press
चर्चित हस्तीलाई हराएको १३ वर्षपछि चर्चामा आएका दावा
२०७७ पुष ११ गते १८:२४
काठमाडौं । दावा तामाङ युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेको समाचार आउँदा आम मान्छेले को हुन् दावा ? भन्ने प्रश्न गरे । राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै नचिनिएका दावा एकाएक मन्त्री बन्दा धेरैले सोधखोज गर्नु स्वाभाविक हो । तर दावाले १३ वर्षअघि नै राष्ट्रिय राजनीतिका एक चर्चित हस्तीलाई पराजित गरेर चर्चा कमाएका थिए ।
#युवा तथा खेलकुद मन्त्री
प्रकाशित: २०७७ पुष ११ गते १८:२४
One thought on “चर्चित हस्तीलाई हराएको १३ वर्षपछि चर्चामा आएका दावा”
डि.बि. गोले says:
माननीय कुमारी मोक्तान अन्तरिम सांसद सदस्य, संबिधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य र अहिले बहलवला प्रदेश सांसद हुनुन्छ ।